Sisi View - IApartment eNtofo neSide Sea View - I-Airbnb
Sisi View - IApartment eNtofo neSide Sea View
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlexandros
UAlexandros ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Ifumaneka kwisiqithi saseKrete, iSisi View lixabiso lestudiyo semali. Indawo esembindini yeSisi Jonga kuSisi onomtsalane, yinto eyothusayo eyothusayo kumgama wokuhamba ukusuka kulwandle olunesanti kwizibuko laseSisi (kumgama oziimitha ezingama-550 kuphela). I-Sisi View yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana iholide yokuphumla kumaqabane kunye nolutsha olujonge amava ohlukeneyo eholide.
Bangakwazi ukuhlalisa ukuya kuthi ga kubantu abadala abathathu kunye nebhedi enye ephindwe kabini kunye nebhedi enye yesofa. Ishawa, iWC, ikona yekhitshi exhotyiswe kakuhle enetafile yokutyela kunye nezitulo, umatshini weEspresso, umatshini wekofu kunye netoaster singasathethi ke ngezixhobo zokuzityisa ezifana nefriji, i-cutlery, icrockery, glassware, kunye neketile ziyafumaneka estudio. Iifasilithi zeFlat TV, isomisi seenwele, i-iron kunye ne-air-conditioning (i-cooling-heating)* ziyafumaneka kweli gumbi.
Ifunyenwe malunga ne-39 Km kude nesikhululo seenqwelomoya saseHeraklion kunye nezibuko kunye neemitha ezingama-500 kuphela ukusuka kwizibuko elincinci laseSisi. Unxweme olunesanti lukaSisi lukumgama oziimitha ezingama-550 kuphela. Ivenkile enkulu ziziimitha ezingama-500 nje zeSisi View, iibhari kunye neevenkile ezinemveliso yemveli kumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Alexandros
Singathanda ukwazisa iindwendwe zethu ukuba siya kuba nakho nangaliphi na ixesha ezinqwenela ukuqhagamshelana nathi. Singathanda ukucebisa undwendwe lwethu ukuba lunokuhlala lunxibelelana nathi ngokuthumela umyalezo ngeqonga lika-Airbnb apho siphendula khona kwiiyure ezingama-24. Ukongeza, undwendwe lwethu lunokucela inombolo yefowuni abanokuthi baqhagamshelane nathi emva kokungena kulo naluphi na uncedo abanokuthi balufune.
Singathanda ukwazisa iindwendwe zethu ukuba siya kuba nakho nangaliphi na ixesha ezinqwenela ukuqhagamshelana nathi. Singathanda ukucebisa undwendwe lwethu ukuba lunokuhlala lunxib…
Inombolo yomthetho: 1046016